EZAMUVA: Imizamo Yokuvala I-JW.ORG ERussia Iyabhuntsha
ULIMI ISpanishi Isi-Albania Isi-Armenia Isi-Estonia Isi-Ewe Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Ukraine IsiBhunu IsiCebuano IsiChewa IsiCroatia IsiCzech IsiDanishi IsiDashi IsiFiji IsiFinishi IsiFulentshi IsiGeorgia IsiGreki IsiHungary IsiJalimane IsiJapane IsiKinyarwanda IsiKirundi IsiKorea IsiLithuania IsiMalagasy IsiNgisi IsiNorway IsiNtaliyane IsiPedi IsiPolishi IsiPutukezi IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbia (SesiRoma) IsiShayina SesiMandarin (Esenziwe Lula) IsiShayina SesiMandarin (Sezinhlamvu Zakudala) IsiSlovak IsiSlovenia IsiSuthu (SaseLesotho) IsiSwahili IsiSwidi IsiTagalog IsiTsonga IsiTswana IsiTurkey IsiXhosa IsiZulu
EST. PETERSBURG, eRussia—OFakazi BakaJehova balinqobile icala lasenkantolo lango-January 22, 2014, ngesikhathi inkantolo okudluliselwa kuyo amacala ishintsha isinqumo senkantolo encane sokuvalwa kwe-jw.org, ingosi engokomthetho yoFakazi BakaJehova, kulo lonke elaseRussia.
INkantolo Yesifunda YaseTver yashintsha isinqumo sango-August 7, 2013 seNkantolo Yesifunda YaseTsentralniy. Le nkantolo yesifunda ithe inkantolo encane yenze ngokungenabulungisa ngokuvala le ngosi ngoba oFakazi BakaJehova, abanikazi bayo, abanikezwanga ithuba lokuzwa udaba nokuziphendulela. Umshushisi waseTver waluyisa enkantolo lolu daba ngoba izinkantolo zaseRussia zazithe i-jw.org inezincwadi “eziyingozi.” Ngokushesha lapho oFakazi BakaJehova bezwa ngesinqumo esithathwe yile nkantolo, bazikhipha lezi zincwadi ku-jw.org eRussia. INkantolo Yesifunda YaseTver yathola ukuthi oFakazi bayahambisana nemithetho yaseRussia yabe isishintsha isinqumo sokuvalwa kwengosi.
OFakazi BakaJehova bathintana nabezomthetho ngokuqondene nezinqumo ezithathwe izinkantolo zaseRussia ezithi ezinye zezincwadi zabo “ziyingozi” futhi sebefake izicelo ezimbalwa eNkantolo YaseYurophu Yamalungelo Abantu zokuba kushintshwe lezi zinqumo.
UGrigory Martynov, ongumkhulumeli woFakazi BakaJehova eRussia, uthi: “Kuyasijabulisa ukuthi amajaji ayakubona ukuba inzuzo kwengosi yethu nokuhlakanipha kwemizamo yethu yokwenza ngokuvumelana nezinqumo zenkantolo yaseRussia. Sizoqhubeka sizivikela izincwadi zethu ezifundisa iqiniso kanye namalungelo ezakhamuzi zaseRussia okuzuza ngokugcwele emsebenzini wethu wokufundisa ngeBhayibheli.”
“OFakazi emhlabeni wonke bajabule ngenxa yalesi sinqumo,” kusho uJ. R. Brown, ongumkhulumeli woFakazi endlunkulu yabo yomhlaba wonke. “Ngenxa yaso, zonke izakhamuzi zaseRussia zizoqhubeka zingena kule ngosi enhle kakhulu efundisa ngeBhayibheli.”